Weydii Khabiir Cabbiran: Miyuu Wanaagsan yahay Isticmaalka Google Mashruucyada Google My Business?
Iyada oo Google My Business u heli karo ganacsiyada yaryar, waxaad hadda si firfircoon uga faa'iideysan kartaa seo mashiinka raadinta adeegyada adeegsashada.
Michael Brown, Maareeyaha Guusha Macaamiisha ee Semt , wuxuu xaqiijinayaa in codsigu uu u oggol yahay SMEs inay abuuraan koonto bilaash ah oo ay maamuli karaan sida ganacsigooda internetka uga muuqdaan.
Sida Google Posts u Shaqeyneyso
Si aad shaqo ugu dirto Google My Business waa mid sahlan. Marka aad gasho shaashaddayda My Business, waxaad u socotaa aagga "posts" ee ku yaala dhinaca bidix ee shaashadda. Laga soo bilaabo waxaa jira ikhtiyaari si loo abuuro boostada cusub. Ganacsiyada waxay isticmaali karaan farriimaha:
Soo-hadal khaas ah maalin kasta ama dallacaadyada cusub
Dhiibo wax kasta oo cusub ama soo socda
Tilmaamaha alaabooyinka ugu fiican ama gelitaanka cusub
Isticmaalaan Google Gmail ama Maya
Faa'iidada isticmaalka mareegaha Google weli waa adag tahay in la go'aamiyo maadaama ay weli tahay mid cusub - get backlinks high pr websites. Suurtagal ma ahan in la xisaabiyo muuqaalka goobta, iyo Google aan si buuxda u baarin xuduudaha posts. Si kastaba ha ahaatee, waa sahlan oo bilaash ah in la abuuro boosto taas oo muujinaysa in uu leeyahay awood weyn..
Dhaqannada Wanaagsan ee Google
Sida wax kasta oo kale oo ka hadlaya Google, waxaa jira hababka ugu wanaagsan ee ay tahay in la raaco marka ay abuurayaan oo maareynayaan shaqadooda.
Ka fogow dhiirigelin iyo iibsi sida luqadda
Google wuxuu mamnuucayaa isticmaalka luuqada qalabka sida sida kan bixiya lacag dhimis sida "BOGO 50% off !!!" maadaama ay u dhaqmaan sida xayeysiinta spammy. Haddii algorithms search ay ka helaan meelo kala duwan, waxay ka saaraan oo ay ciqaabi karaan milkiilaha. Mid ka mid ah waa inuu isticmaalaa fursad uu ku iibiyo macaamiisha macluumaadka dabiiciga ah kaas oo ka dhigaya inay ogaadaan waxa uu ganacsigu hadda qabto.
Aqoonsi kasta boostada adoo ka mid ah macluumaadka ugu badan ee suurtogalka ah
maaddaama Google Google ay siiso biilal fara badan si loo buuxiyo macluumaadka, waxay ku xiran tahay milkiilaha ganacsiga si loo hubiyo in ay buuxiyaan macluumaadka inta ay awoodaan. Cinwaannada indhaha iyo sawirada diirada la saarayo waa inay ka caawiyaan inay soo qabtaan dareenka qofka isticmaala oo u kaxeeya goobta. Mararka qaar, macaamiishu waxay ka heli karaan macluumaad faahfaahsan oo ku saabsan boostada oo waxtar leh Intaas waxaa sii dheer, in badan oo macluumaadka ah, ayaa sare u sii kacaya fursadaha ujunta algorithms inay soo qaadaan ereyga muhiimka ah.
Waqtiga iyo shakhsiga
Waraaqaha loo marayo moobiilka waa inay ku wargeliyaan arrimaha xasaasiga ah. Marka ay joojiyaan in ay noqdaan kuwo khuseeya, waxaa jira ikhtiyaar si ay si joogto ah uga tirtiraan, ama dib ugu noqdaan si ay u adeegaan ujeedo kale. Qaadashada shakhsiyadda leh waxay hubinaysaa in ay jirto rafcaan gaar ah oo loogu talagalay dhageystayaasha bartilmaameedka degmada.
Ha dayicin qorshaha SEO-ga ee deegaanka
Raadinta rafcaanku waa geedi socod joogto ah oo sidaas daraadeed waa in lagu dadaalaa sidii loo sii wadi lahaa adeegyada macaamiisha raadinta deegaanka. Taas macnaheedu waa soo jiidashada xidhiidhyo badan, soo saarida waxyaabaha u sharaxan macaamiisha maxaliga ah, iyo ururinta dib u eegis wanaagsan.
Ma jirto cid sheegaysa sida ay u noqon karto mulkiilaha ganacsiga yar yar laakiin wuxuu ka caawin karaa kor u qaadista dhacdooyinka, bandhigyada, iyo wararka loogu talagalay alaabadooda.